Pads polishing malefaka fantatra amin'ny anarana hoe Diamond Polishing Pads dia ampiasaina amin'ny famolahana na famonoana granite, marbra, vato voajanahary ary beton sitrana. Diamond Polishing Pads dia miaraka amin'ny fanohanan'i Velcro ary misy amin'ny sanda feno grit 50 ka hatramin'ny 3000 #; ny paosin'ny famolavolana farany dia misy amin'ny loko mainty sy fotsy. Diamond Polishing Pads dia namolavola lamina manokana momba ny fitomboan'ny fahalalahana, ny rano mikoriana ary ny fiainana pad
Volon'ondry vy sy kapila ampiasaina matetika any amin'ny hotely, toeram-pivarotana lehibe, tranobe varotra avo lenta toy ny gorodona vato na terrazzo ho an'ny fanadiovana sy fikarakarana. Azo ampiasaina amin'ny pharmaceutika amin'ny milina polishing. Ny kapila famolavolana 0 # dia ampiasaina amin'ny fitaovana vato malefaka sy vato rahona; 1 #, 2 # dia lany tamin'ny fitaovana mafy kokoa toy ny granita.